Xildhibaanada shida sharcidarada looga joohuyey kulamada oo iska diiday | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xildhibaanada shida sharcidarada looga joohuyey kulamada oo iska diiday
udoomiyaha golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray kaga mamnuucay in shan kulan ay yeelanayaan Xildhibaanada golaha shacabka kasoo qeyb galaan 15-mudane oo lagu eedeeyay in qas ka sameeyeen xarunta Baarlamaanka.
Xildhibaanadan laga mamnuucay fadhiya baarlamaanka ayaa sharci daro ku tilmaamay go’aanka kasoo baxay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal, waxa ayna cadeeyeen in aysan u hogaansami doonin go’aankaasi.
Sadiiq Warfaa oo katirsan Xildhibaanada golaha shacabka ayaa nasiib daro ku tilmaamay qoraalka kasoo baxay Gudoomiye Mursal, waxa uuna sheegay in Xildhibaanka xasaanad leeyahay uuna fikirkiisa cabiri karo.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo isna kamid ah Xildhibaanada laga mamnuucay fadhiyada Baarlamaanka ayaa Gudoomiyaha baarlamaanka ku tilmaamay mid aan garasho sharci laheyn.
”Maxamed Mursal wuxuu kulansaday garasho la’aan sharciyadeed iyo garaad yari siyaasadeed. Fidnada uu ka talinayana cawaaqib xumada ka dhalata isaga ayaa si shakhsi ah u qaadaya mas’uuliyadeeda!” ayuu yiri Mahad Salad.
Xildhibaanadan laga joojiyay 5-ta kulan ee Baarlamaanka ayaa ah Xildhibaano mucaarad ah oo si weyn uga soo horjeeda in mudo kororsi sameeyaan Xildhibaanada golaha shacabka ee taageersan Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Farmaajo.
Previous articleWeerar Ismiidamin loo adeegsaday oo ka dhacay Dalka Indooniisiya
Next articleIsku dhawaansho laga soo sheegay kulamada Shanta Maamul Goboleyd ee shirka uga socda Xalane
https://youtu.be/VKGSx4DL9cora iisal wasarahii Hore
Goobaha codbixinta doorashada J. Congo oo furmay iyo mucaaradka oo qaadacay